MSF "waan bilownay howlihii Isbitaalka Xaawa Cabdi" | KEYDMEDIA ONLINE
MSF “waan bilownay howlihii Isbitaalka Xaawa Cabdi”
Hey'adda Dhaqaatiirta aan Xuduuda laheyn ee MSF oo ka mid ah Hey'addaha tirada yar ee iyagu u muuqda in ay dhaqdhaqaaq howleed muujnayaan ayaa shaaca ka qaaday in ay dib u bilowday howlihii Caafimaad ee ay ka heysay isbitaalka Xaawa Cabdi ee duleedka Muqdisho.
Madaxa howlgalka MSF David Querlo ayaa sheegay in deeganadaasi looga baahanyahay howl caafimaad oo baaxad leh sidaa darteedna ay MSF u go'aansatay in howlaheedii ay dib u bilowdo.
MSF ayaa isbitaal deegaaneedkaasi ka fulin jirtay howla caafimaad oo isugu jira bukaan jiif, bukaan socod eegto iyo waliba quudin, laakiin howshaasi ayuu ku yimid kala dhantaalan kadib markii Ciidamada Xisbul islaam ay wareereen isbitaalkaasi isla markaana ay kaxeesteen Drs Xaawa Cabdi Dhiblaawe oo isbitaalkaasi gacanta ku heysay.
"Haa waa sax isbitaalka waa uu howl bilaabay dhawaan, waxaana hada si caadi ah uga socda howlihii caafimaadka, shalay ayaan geeyay qof bukaan ah" sidaa waxaa u sheegtay Keydmedia.net Mulki oo ka mid ah Haweenka Deegaankaasi ku barakacay.
Mudadii howsha isbitaalkaasi ay hakadka ku jirtay waxaa aad u tabay dadka danyarta ah ee deegaankaasi ku nool, kuwaa oo iyaga aan heli dhaqaale buuran oo ay isbitaalada kale ku aadaan.